देउवा सरकारमा सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री बन्दै
July 19, 2021 N88LeaveaComment on देउवा सरकारमा सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री बन्दै
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफू पक्षीय प्रभावशाली नेताहरुसँग सरकारमा सहभागिताबारे छलफल बढाएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेकाले सरकारमा उनीपछिको वरियतामा आफूपक्षीय नेता हुनुपर्ने भन्दै पौडेलले दबाब सृजना गर्नेबारे छलफल चलाएका हुन् । आज पौडेल पक्षका नेताहरुको टोखास्थित महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाको निवासमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा […]
ओली विरुद्ध मानहानीको मुद्धा हाल्ने झाँक्रीको चेतावनी
July 19, 2021 N88LeaveaComment on ओली विरुद्ध मानहानीको मुद्धा हाल्ने झाँक्रीको चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी नेत्री तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीको नेतृत्वका विरुद्ध मानहानीको मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिएकी छिन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट २२ जना सांसदलाई अनुशासनको कारबाहीका लागि भन्दै सोधेको स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ नभएको भन्दै जबर्जस्ती कारबाहीको निर्णय गरे अदालतको मानहानीमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएकी हुन् । एमालेका २२ जना प्रतिनिधि […]
शान्ति सेना पठाउने देशको दोस्रो स्थानमा नेपाल
July 19, 2021 N88LeaveaComment on शान्ति सेना पठाउने देशको दोस्रो स्थानमा नेपाल
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै सेना पठाउने देशेका दोस्रो स्थानमा नेपाल पर्न सफल भएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार गत अप्रिल सम्ममा सेना, प्रहरी र सशस्त्र गरी पाँच हजार ५ सय ७१ फौज सहभागी रहेका छन् । जसमध्ये २ सय ९४ जना महिला छन् । शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै बंगलादेश, दोस्रोमा नेपाल, […]
साउन ६ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारकाे निर्णय
July 19, 2021 N88LeaveaComment on साउन ६ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारकाे निर्णय
काठमाडाैं । सरकारले ६ साउनमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बकर इदको अवसरमा ६ साउनमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता कार्कीले मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण पर्व भएकाले विदा दिने निर्णय गरिउको जानकारी दिए। मुस्लिम समुदायले बकर इदमा विदा दिन माग गर्दै आएका थिए। […]
July 19, 2021 N88LeaveaComment on रानी ऐश्वर्य कति राम्री !
ह्यान्डसम राजा, सुन्दरी रानी ! दिवंगत राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्यका प्रसंगमा यस्ता अनेक किस्सा सुनिन्छन् । खासमा रानी ऐश्वर्य कति राम्री थिइन् त ? ३० वर्षसम्म नेपालकी रानी भएकी ऐश्वर्य बिछट्ट सुन्दरी थिइन् । नारीजन्य शास्त्रीय सुन्दरता विशेष थियो उनमा । उनको रुप, लावण्य मात्र नभएर हेयर स्टाइल, चस्मा र परिधानको निकै चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो […]
डा. झा भन्छन् ‘अंगिकृत नागरिकलाई राजनैतिक अधिकार कदापी दिनुहुन्न, देशलाई बर्बाद बनाउछन्’
July 19, 2021 N88LeaveaComment on डा. झा भन्छन् ‘अंगिकृत नागरिकलाई राजनैतिक अधिकार कदापी दिनुहुन्न, देशलाई बर्बाद बनाउछन्’
काठमाडाैं । अंगिकृत नागरिकलाई राजनैतिक अधिकार कदापि दिनुहुन्न, अंगिकृतले देशलाई बर्बाद बनाउछन: डा. झा नागरिकताको सवालमा अंगीकृत नागरिकले राज्य सञ्चालनका संवेदनशील पद पाउनुपर्छ भन्ने मधेसका आम जनता र मधेसका बुद्धिजिवीको पनि माग छैन । नागरिकताको सवालमा एक पटकलाई राज्यले घर घरमा गएर क-कसले नागरिकता पाएका छैनन् ? को बाहिरबाट आएको हो, को बास्तवमै मधेसमा जन्मिएको […]
बालकुमारीको हनुमन्ते खोला किनारमा माधव नेपाललाई जलाइयो
July 19, 2021 N88LeaveaComment on बालकुमारीको हनुमन्ते खोला किनारमा माधव नेपाललाई जलाइयो
काठमाडौं । ओली निकट राष्ट्रिय युवा संघले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पुत्ला जलाएको छ । सोमबार ललितपुरको बालकुमारी पुल नजिकै हनुमन्ते खोला किनारमा युवासंघले नेता नेपालको पुतला जलाएको हो । पार्टीविरुद्ध गद्धार काम गरेको आरोप लगाउदै उनीहरूले हनुमन्ते खोलामा नाराबाजी पनि गरेका थिए । नाराबाजी गरेपछि त्यहाँ प्रहरी पुगेको थियो । नेपाल निवासमै […]
कोभिड नेपाल: थप २४ सय जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण, ३२ जनाको मृत्यु
July 19, 2021 N88LeaveaComment on कोभिड नेपाल: थप २४ सय जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण, ३२ जनाको मृत्यु
काठमाडाैं । नेपालमा थप २,४४५ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र ३२ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमवार अपराह्ण प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार ११,६६४ जनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। तीमध्ये ३,८३१ जनाको परीक्षण एन्टिजन विधिबाट र अरूको पीसीआर विधिबाट गरिएको हो। कुल परीक्षणको झन्डै २१ प्रतिशतमा सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रायलको तथ्याङ्कले देखाउँछ। […]
सवारीचालक लाइसेन्सकाे आवेदन खुल्दै, रोकिएको परीक्षा कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
July 19, 2021 N88LeaveaComment on सवारीचालक लाइसेन्सकाे आवेदन खुल्दै, रोकिएको परीक्षा कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
काठमाडाैं । कोरोनाभाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागु गर्दा बन्द भएको सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन तथा परीक्षा “दुई साताभित्र खुला गर्ने” गृहकार्य थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले काठमाण्डू उपत्यकासहित विभिन्न सहरमा गत वैशाख १६ गतेबाट जारी गरेको निषेधाज्ञा निरन्तर खुकुलो पार्दै लगेको अवस्थामा लाइसेन्सको आवेदन र परीक्षा थाल्ने तयारी […]
आजबाट ओली र माधवको आआफ्नै बाटो, माधवको पनि नयाँ पार्टी घोषणा हुँदै !
July 19, 2021 July 19, 2021 N88LeaveaComment on आजबाट ओली र माधवको आआफ्नै बाटो, माधवको पनि नयाँ पार्टी घोषणा हुँदै !
काठमाडाैं । ‘नेकपा एमाले फुटाउने षड्यन्त्र भो !हतार गर्दै आजै विश्वासको मत लिनेको उद्देश्य यही हो !’ कोटेश्वरमा भीम आचार्य माधवकुमार नेपालका सामु त्यसै कुर्लिएका होइनन् । आज विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नेलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने निर्णय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठकबाट गराइसकेका छन् । आज विश्वासको मतको पक्षमा को को सांसदले मतदान […]